Centrifugal Pump Factory - China Centrifugal Pump Abakhiqizi, abahlinzeki
I-DG chungechunge ehlukaniswe ipompo ye-centrifugal isebenzisa amabhawodi wokungezwani ukuxhuma itheku lamanzi, isigaba esiphakathi nendawo yesitolo kumkhiqizo wonke. Isetshenziswa emanzini okondla ama-boiler nakwamanye amanzi ahlanzekile anezinga lokushisa eliphezulu. Lolu chungechunge lunezinhlobo eziningi zemikhiqizo, ngakho-ke inebanga elikhulu lezicelo. Futhi, inokusebenza okungcono nokusebenza kahle okuphezulu kunezinga elijwayelekile.
Isetshenziselwa ikakhulukazi umsebenzi wokulwa nomlilo ezitezi ezahlukahlukene nokumelana kwepayipi.